Madaxweynaha Somaliland Oo Muuse Biixi Cabdi Oo Diiday Dalab Uu Shiinuhu U Soo Bandhigay Si Ay Xidhiidhka Ugu Jaraan Taiwan – Allsomali.net
HomeSomalilandMadaxweynaha Somaliland Oo Muuse Biixi Cabdi Oo Diiday Dalab Uu Shiinuhu U Soo Bandhigay Si Ay Xidhiidhka Ugu Jaraan Taiwan
6 August 2020 allsomali Somaliland, Wararkii Ugu Dambeeyay 0
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu soo waramayaa inuu diiday dalab shuruudo ku xidhan oo ay u soo bandhigeen waftigii ka yimid dalka shiinaha si ay xidhiidhka diblomasiyadeed ugu jaraan dalka Taiwan Isaga oo waliba u sheegay in ay qaadayaan talaabo ay ku xoojinayaan xidhiidhka labada dal.
waxaa soo shaacbaxay warar sheegaya in Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu faray xukuumadiisa qaab loo adkayn karo xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan oo ay ka mid tahay suurtagalnimada in ay Somaliland aqoonsato madaxbanaanida Taiwan Taas oo keentay Salaasadii in ay Wafti shiine ah yimaadaan Somaliland xilli uu safiirka Shiinaha ee Somaliya ee Qin Jian uu kusan yahay Hargies si uu ula kulmo madaxweyne biixi.
Baaraha iyo falanqeeyaha Rashiid Cabdi ayaa bogiisa Twitter-ka soo dhigay in uu Qin diyaariyay diblomaasiyiinta Culus oo uu Somaliland ugu xanjabay laakiin Muuse Biixi ayaa diiday xeeladaas saacado kadibna waxa uu wuxuu amar ku siiyay wasaaradiisa arrimaha dibedda inay bilaabaan hawsha Aqoonsiga Taiwan Xilli uu Madaxeyne biixi gabi ahaan diiday in uu la kulmo safiirka Qin.
Maanta oo Khamiis ahayd kuna beegnayd 6 bisha August ayuu madaxweyne Biixi la kulmay waftiga ka socday shiinaha oo uu ka mid ahaa Safiirka Somaliya ee Qin waxana ay qaateen kulan saacado qaatay.
Waftiga shiinaha ayaa la sheegayaa in ay Somaliland u soo bandhigeen xidhiidh diblomaasi oo ay Dalka ugu dhisayaan wadooyinka, madaarada iyo waliba mashruucyo kale oo badan laakiin ay xidhiidhka u jawaan Taiwan.
Laakiin Madaxweyne biixi ayaa diiday dalabkaas isaga oo u sheegay waftiga in ay xidhiidhka u jaraan Taiwan iska daaye in ay sii xoojinayaan xidhiidha labada dal.